पर्वै पर्वको यो साता, कुन दिन के पर्व ? « Pen Nepal
पर्वै पर्वको यो साता, कुन दिन के पर्व ?
Published On : 17 August, 2020 10:41 pm By : पेननेपाल
काठमाडौं । भदौ महिनाको पहिलो साता पर्वै पर्वको साता रहेको छ । सुर्यले कर्कट राशी छाडेर सिंह राशीमा प्रवेश गर्ने भएकाले भदौ संक्रान्तिलाई सिंह सक्रान्ति भनिन्छ । भने यस महिनाको सात गतेसम्म नेपालीहरूले मनाउने विशेष पर्वै पर्व परेको छ ।
भदौंको तीन गते बुधबार कुशे औंसी अर्थात बाबुको मुख हेर्ने दिन परेको छ । नेपाली परम्पराअनुसार यस दिन ब्राम्हण/पुरोहितले आफ्ना जजमान कहाँ कुश पुर्याउने गर्दछन् । कुशलाई सनातन धर्ममा पवित्र वनस्पती मान्छि । यस दिन उखेकोको कुशले वर्षभरी धार्मिक तथा पित्रृ कार्य गरिन्छ । यसै दिन बाबुको मुख हेर्ने दिनकारूपमा पनि मनाइन्छ । आफ्नो जन्मदिन बाबुलाई भगवानकोरूपमा मान्दै छोराछोरीले विभिन्न मिष्टान्न भोजन ख्वाउने र वस्त्र पहिर्याउने गर्दछन् । बाबु नभएकाले पवित्र नदी तथा तिर्थस्थलमा गएर बाबुको श्राद्ध गर्ने प्रचलन छ ।
भदौं चार गने बिहीबार हिन्द्, सनातन धर्मावलम्वी महिलाले मनाउने तीज बैतको अघिल्लो दिन हो । यस दिनलाई दरखाने दिन पनि भनिन्छ । यस दिन छोरीचेली माइत आएर माइतीले बनाएको मिठामिठा परिकार खाएर, भोलीपल्टको निराहार ब्रतको तयारी गर्दछन् ।
भदौं ५ गते शुक्रबार हरितालिका तीज ब्रतको दिन हो । यस दिन पति र परिवारको सुस्वास्थ्य दिर्घायुको कामना गर्दै महिलाहरू निराहार ब्रत बस्दछन् र भगवान शिवको पुजा, आराधना गर्दछन् । नेपाली समाजमा तीजको विशेष महत्व रहदै आएको छ । यस दिन महिलाहरू पवित्र नदी, तलाउमा गएर स्नान गरी, नाचगान गर्दै ब्रत बस्दछन् । यस पटक कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण यो पर्व पहिलेजस्तो उल्लासमय भने नहुने भएको छ ।
भदौं ५ गते शनिबार गणेश चतुर्थी पर्व परेको छ । यस दिन भगवान गणेशको जन्म भएको मानिन्छ । सुख र समृद्धीका देवताकारूपमा गणेश चतुर्थी मनाउने गरिन्छ । खासगरी तराई–मधेसमा गणेश चतुर्थी धुमधामकासाथ मनाउने गरिन्छ । यो पर्वलाई पनि यस पटक कोरोना महामारीले प्रभावित भएका कारण श्रीहीन हुने भएको छ । तराई–मधेसका अधिकांश जिल्लामा कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था रहेका कारण कतिपय जिल्लामा त निषेधाज्ञा लागु भएको छ ।
भदौ ६ गते आइतबार ऋषिपञ्चमी परेको छ । यो दिन पनि महिलाहरूले पर्वका रूपमा मनाउछन् । यस दिन विहान महिलाहरू नदी तथा तलाउमा गएर अपमार्गका ३६० पातले स्नान गर्ने, ३६० अपमार्गका डाँठले दन्तमञ्जन गर्ने गरेर शुघ भई अरुन्धतीसहित सप्त ऋषिको पुजा गर्ने प्रचलन छ । यसो गर्नाले रजश्वला हुँदा भुलचुकमा छोइछितो भएको पाप नष्ट हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।